အဆင့်အားဖြင့် Yoast SEO ဆိုသည်မှာအဆင့်အတွက် Google Webmaster Tool ကိုတင် Get လုပ်နည်း | WikiWon
Webmaster Tool ကိုဆိုတာဘာလဲ
Google Search ကို Console (ယခင်က Google Webmaster Tools များ) အတွက် Google အားဖြင့်တစ်ဦးမျှတာဝန်ခံကို web service တစ်ခုဖြစ်ပါသည် WEBMASTERS.Webmaster tool ကိုသင့်ရဲ့ website မှာပြသမှာ google အညွှန်းကိန်းအတွက်ခွင့်ပြု. သင်သည်သင်၏ site ကိုပြသမှာ google ပထမဦးဆုံးစာမျက်နှာလိုပါကမြင့်အာရုံစိုက်သော့ချက်စာလုံးတွေအတိုင်းလိုက်နာ.
ဒီနေ့ကိုယ့် t ကို yoast SEO ဆိုသည်မှာအတွက်မာစတာ tool ကိုသွင်းထားရပုံကိုသငျသညျသှနျသငျ. ၎င်း၏အလွန်မြင့်မားပြဿနာပြပွဲအခြားသူများကိုလူတွေရဲ့ပေမယ့်သူ့ရဲ့ဖြေရှင်းနိုင်တစ်ချိန်ချိန်ကိုဘယ်လိုထင်ပေမယ့်ကိုယ့် google မှာရှာပြီးနှင့်အလွန်လွယ်ကူစွာဖြေရှင်းနိုင်. သင်ကလုပျနိုငျကိုဘယ်လိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်. ပထမဦးစွာသင် WordPress ကို hosting ဝယ် Create နှင့်ဒိုမိန်းထား, သင်သည်ဤ site ထဲမှာ yoast seo ထားဖို့ဘယ်လိုစဉ်းစားလျှင်ယခုသင့်ရဲ့ website မှာပြု, အဖြေတစ်ခုရှိကိုမစိုးရိမ်ကြ. plugin ကိုထည့်သွင်းဖို့သွားနဲ့ search yoast SEO ဆိုသည်မှာချသင့်ရဲ့ရှာဖွေရေးဘက်ခြမ်းအတွက်ထိပ်ဆုံးမှရလဒ်ကိုပြသ. install လုပ်ဖို့ကိုနှိပ်ပါ, ပဲမိနစ်အနည်းငယ်စောင့်ဆိုင်းနေ, Active Buttons ပြယခုကကိုကလစ်နှိပ်ပါ. တက်ကြွခလုတ်ကိုနှင့်သင့် website ကဆိုက်သစ်စာမျက်နှာကိုပြသ. သငျသညျ tab အသစ်ရှာဖွေရေး Google Webmaster tool ကိုစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်ယခုကကိုကလစ်နှိပ်ပါကြဘူးထားဖို့ဘယ်လိုစဉ်းစားပါလိုလျှင်. လည်းစကားဝှက်နဲ့သင့်ရဲ့ gmail ကသွင်းထား, တဦးတည်း tab ကိုပြရန်. တဦးတည်းအိမ်ခြံမြေ Add ပြရန်, သင့်ရဲ့ website မှာ add ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်ထား, အသစ်တစ်ခု tab ကိုပြရန်, သငျသညျက၎င်း၏ဖြေရှင်းဖို့ဘယ်လိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်, သူ့ရဲ့ခြေလှမ်းဟာအလွန်လွယ်ကူစွာ meta tag ကိုမှ method ကိုကလစ်ပါ tag ဖို့ကိုနှိပ်ပါပြရန်, သင်ဤ code ကိုသငျသညျဆိုက်ပဲ Google Webmaster အတွက်ထား Google Webmaster tool ကိုရှိပါက code ကို copy ကူးခြင်းနှင့် yoast မာစတာ tool ကိုသွင်းထား, နှင့်သင့် site ကိုစာမျက်နှာကိုကယ်တင်. သင်အချို့သောပိုပြီးအပြောင်းအလဲများဥပမာအားပြောင်းလဲရန် အကယ်. customize, လည်းလိုအပ်ပါတယ်ဒီ tab ကိုကယ်တင်ပါ. အခုမာစတာ tool ကိုဖို့ကိုနှိပ်ပါ verify နှင့်ဆက်လက်ကလစ်နှိပ်ပါ.
တစ်ချိန်ချိန်မှာသူ့ရဲ့ဖြေရှင်းပေးပေမယ့်ကိုယ့်အလွန်လွယ်ကူစွာ google မှာရှာဖြေရှင်းဖို့ဘယ်လို. သင်ကလုပျနိုငျကိုဘယ်လိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်.
First Create WordPress hosting buy and put the domain, အခုသင့်ရဲ့ website မှာပြု
plugin ကိုထည့်ပါသွားပြီးရှာဖွေရေး yoast SEO ဆိုသည်မှာချသင့်ရဲ့ရှာဖွေရေးဘက်ခြမ်းအတွက်ထိပ်ဆုံးမှရလဒ်ကိုပြသ.
install လုပ်ဖို့ကိုနှိပ်ပါ, ပဲမိနစ်အနည်းငယ်စောင့်ဆိုင်းနေ, Active Buttons ပြယခုကကိုကလစ်နှိပ်ပါ.
Active ကိုခလုတ်နှင့်သင့် website ကဆိုက်သစ်စာမျက်နှာကိုပြသ.
နယူး tab ကိုရှာဖွေရေး Google Webmaster tool ကို.
လည်းစကားဝှက်နဲ့သင့်ရဲ့ gmail ကသွင်းထား.
သင့်ရဲ့ website မှာ add ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်ထား.
meta tag ကိုမှ method ကိုကလစ်ပါ tag ဖို့ကိုနှိပ်ပါ.
code ကို copy ကူး.
yoast မာစတာ tool ကိုသွင်းထား.
ဒီ code ကိုမှာ google မာစတာကိုသငျသညျဆိုက်.
သင့်ရဲ့ site ကိုစာမျက်နှာ Save.
ယခုအတည်ပြုရန်မာစတာ tool ကိုဖို့ကိုနှိပ်ပါ.
ရက်အနည်းငယ်မှာ google သင့်ရဲ့တောငျးဆိုခကျြကိုလကျခံနှင့် Google Webmaster tool ကို၌သင်တို့၏ website ကိုပြသ.
၎င်း၏အလွန်လွယ်ကူစွာ ခြေလှမ်းများ, ငါသည်သင်တို့ကိုနားလည်နေကြပါတယ်မျှော်လင့်ပါတယ်.
WordPress ကိုပိုမို	bing webmaster tools, get google authorization code, google analytics tools, google authorization code search console, google authorization code yoast, google webmaster guidelines, google webmaster tools verification, google webmaster tools wordpress plugin, how to add google webmaster tools to wordpress, how to upload google html verification file wordpress, sitemap generator, submit site to google, there were no profiles found yoast, webmaster job description, webmaster tools submit url, wordpress yoast seo, yoast search console, yoast seo, yoast seo focus keyword, yoast seo review, yoast seo tutorial	bookmark
ယခင်အပိုဒ် 10+ အများစုမှာ Definiatio မိသားစု | မမှန်သောအသံကွိုး | Famciclovir
next ကိုပုဒ်မ အဆင့်များက Yoast SEO ဆိုသည်မှာအဆင့်အတွက် Bing မှ Webmaster Tool ကိုတင် Get လုပ်နည်း.
vinay chouhan ဇွန်လ 5, 2017 / 4:55 နံနက်
mujeer ဇွန်လ 5, 2017 / 7:37 နံနက်